1 Beresosɛm 21:1-30
21 Satan sɔre gyinae de n’ani sii Israel so, na opiapiaa+ Dawid sɛ ɔnkan Israelfo. 2 Enti Dawid ka kyerɛɛ Yoab+ ne ɔman no mu atitiriw sɛ: “Monkɔ nkɔkan+ Israelfo mfi Beer-Seba+ nkosi Dan,+ na mommɛka nkyerɛ me mma minhu wɔn dodow.”+ 3 Na Yoab kae sɛ: “Yehowa mma ne man mmu mmɔ ho ɔha.+ O me wura ɔhene, wɔn nyinaa nyɛ wo nkoa anaa? Dɛn nti na me wura pɛ sɛ ɔyɛ eyi?+ Adɛn nti na worebɛma asodi aba Israel so?” 4 Nanso, ɔhene asɛm+ bu faa Yoab so, enti Yoab kɔe+ kokyin Israel nyinaa, na ɔsan baa Yerusalem.+ 5 Afei Yoab de nnipa a wɔkan wɔn no dodow ho amanneɛbɔ brɛɛ Dawid; Israelfo no dodow si mmarima a wɔtwe nkrante+ ɔpepem biako ne mpem ɔha, na Yuda dodow si mmarima a wɔtwe nkrante mpem ahanan aduɔson. 6 Na Lewi+ ne Benyamin de, Yoab ankan wɔn anka ho,+ efisɛ ɔhene asɛm no yɛɛ no abufuw. 7 Asɛm yi yɛɛ nokware Nyankopɔn ani so bɔne,+ enti ɔteɛɛ ne nsa kaa Israel. 8 Ɛnna Dawid ka kyerɛɛ nokware Nyankopɔn sɛ: “Ade a mayɛ yi de, mayɛ bɔne+ kɛse. Na afei, mepa wo kyɛw, ma w’akoa bɔne ntwam nkɔ,+ na madi nkwaseasɛm paa.”+ 9 Na Yehowa ka kyerɛɛ Gad+ a ɔyɛ Dawid ɔdehufo+ no sɛ: 10 “Kɔ, na kɔka kyerɛ Dawid sɛ, ‘Nea Yehowa aka ni: “Nneɛma abiɛsa na mede resi w’anim.+ Yi mu biako na memfa nyɛ wo.”’”+ 11 Ɛnna Gad siim kɔɔ Dawid anim+ kɔka kyerɛɛ no sɛ: “Nea Yehowa aka ni, ‘Yi nea wopɛ, 12 mfe abiɛsa ɔkɔm;+ anaa asram abiɛsa a mo atamfo de bɛpra mo akɔ+ ama wɔn nkrante anya mo; anaa Yehowa nkrante a ɛbɛba mo so nnansa+ ama ɔyaredɔm+ aba asase no so, na Yehowa bɔfo de ɔsɛe+ aba Israel asase nyinaa so.’ Afei ma me mmuae nkɔma Nea ɔsomaa me no.” 13 Ɛnna Dawid ka kyerɛɛ Gad sɛ: “Asɛm yi ama mabotow. Mesrɛ wo, ma menhwe Yehowa nsam+ mmom, na ne mmɔborɔhunu dɔɔso pii,+ na onipa nsam de, mma mennhwe.”+ 14 Enti Yehowa de ɔyaredɔm+ baa Israel maa nnipa mpem aduɔson totɔe+ Israel. 15 Afei nso, nokware Nyankopɔn somaa ɔbɔfo kɔɔ Yerusalem sɛ ɔnkɔsɛe hɔ.+ Bere a ofii ase sɛ ɔresɛe hɔ ara pɛ, Yehowa hui na mmusu a ɛbae no yɛɛ no mmɔbɔ,+ enti ɔka kyerɛɛ ɔbɔfo a ɔredi awu no sɛ: “Ayɛ yiye!+ Fa wo nsa to hɔ.” Saa bere no, na Yehowa bɔfo no gyina Yebusini+ Ornan awiporowbea+ no nkyɛn. 16 Dawid maa n’ani so, na ohuu Yehowa bɔfo+ no sɛ ogyina ɔsoro ne asase ntam atwe ne nkrante+ akura ne nsam, na ɔde akyerɛ Yerusalem so. Ntɛm ara na Dawid ne mpanyimfo a wofurafura atweaatam+ no de wɔn anim butubutuw fam.+ 17 Ɛnna Dawid ka kyerɛɛ nokware Nyankopɔn sɛ: “Ɛnyɛ me mmom na mekae sɛ wɔnkan ɔman no, na ɛnyɛ me na mafom na mayɛ amumɔyɛde?+ Nguan+ yi de, dɛn na wɔayɛ? O Yehowa me Nyankopɔn, mesrɛ wo, me mmom na teɛ wo nsa wɔ me so, me ne me papa fie, na ɛnyɛ wo man+ na ɛsɛ sɛ wode ɔhaw ba wɔn so.” 18 Na Yehowa bɔfo no ka kyerɛɛ Gad+ sɛ ɔnka nkyerɛ Dawid na Dawid nkosi afɔremuka mma Yehowa wɔ Yebusini Ornan awiporowbea+ hɔ. 19 Na Dawid kɔe sɛnea Gad asɛm a ɔkae wɔ Yehowa din mu no te.+ 20 Saa bere no, Ornan+ twaa n’ani na ohuu ɔbɔfo no, na ne mma baanan a wɔka ne ho no kohintawee. Ná Ornan reporow awi. 21 Ɛnna Dawid kɔɔ beae a Ornan wɔ no. Bere a Ornan maa n’ani so a ohuu Dawid+ no, ntɛm ara na ofii awiporowbea hɔ, na ɔde n’anim kobutuw fam wɔ Dawid anim. 22 Ɛnna Dawid ka kyerɛɛ Ornan sɛ: “Fa awiporowbea no ma me na minsi afɔremuka wɔ hɔ mma Yehowa. Ka ne bo+ kyerɛ me ma mintua ka+ na ɔhaw+ no mfi ɔman no so.” 23 Na Ornan ka kyerɛɛ Dawid sɛ: “Mede kyɛ wo;+ ma me wura ɔhene nyɛ nea eye n’ani so. Hwɛ, mɛma wo anantwi+ a wode bɛbɔ ɔhyew afɔre ne awiporow+ ade a wode bɛyɛ nnyina+ ne awi a wode bɛbɔ aduan afɔre. Mede ne nyinaa ma wo.”+ 24 Nanso, Ɔhene Dawid ka kyerɛɛ Ornan sɛ: “Dabi, ɔtɔ na mɛtɔ atua ho ka nyinaa,+ na meremfa nea ɛyɛ wo dea nkɔbɔ ɔhyew afɔre mma Yehowa a merentua ka.” 25 Enti Dawid karii sika nnwetɛbona ahansia maa Ornan de tɔɔ hɔ.+ 26 Ɛnna Dawid sii afɔremuka+ wɔ hɔ maa Yehowa, na ɔbɔɔ ɔhyew afɔre ne asomdwoe afɔre wɔ so. Ɔmaa ne nne so frɛɛ Yehowa+ na afei ogyee no so, na ɔtɔɔ ogya+ fi soro beguu ɔhyew afɔre no so. 27 Afei nso Yehowa kasa kyerɛɛ ɔbɔfo+ no ma ɔsan de ne nkrante no hyɛɛ ne boha mu. 28 Bere a Dawid hui sɛ Yehowa atie no wɔ Yebusini Ornan awiporowbea hɔ no, ɔkɔɔ so bɔɔ afɔre wɔ hɔ.+ 29 Saa bere no, na Yehowa ntamadan a Mose yɛe wɔ sare so ne afɔremuka a wɔbɔ so ɔhyew afɔre no wɔ sorɔnsorɔmmea a ɛwɔ Gibeon+ no. 30 Ná Dawid ntumi nkɔɔ hɔ nkobisaa Onyankopɔn hɔ biribi efisɛ na osuro+ Yehowa bɔfo no nkrante no.